Ihe ncheta ga -eweta site na njem? | Save A Train
Home > Travel Atụmatụ > Ihe ncheta ga -eweta site na njem?
Zụọnụ Travel China, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ njem Russia, Train Travel Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe, Travel Atụmatụ
Ị nwere ike icheta njem ọ bụla ị garala, isiokwu ndị masịrị gị, na nri ị detụrụ ire? Ikekwe ọ bụghị, na ọ bụ ya mere ihe ncheta ji bụrụ ụzọ zuru oke iji mee ka ncheta ndị ahụ dịrị ndụ. Kedu ihe ncheta ị ga -eweta na njem? Ndị a bụ echiche ncheta kacha mma iji weta otu paradaịs laa azụ.
Ihe ncheta ị ga -eweta site na njem: Efrata Nri
Ngwa nri, ihendori, ahịhịa, ga -akpọghachite gị ozugbo na ụtọ, isi, na oge nke ebe ahụ pụrụ iche. Ọ na -egosi na anyị na -echeta ihe kachasị site n'echiche anyị, na nri bụ ụzọ kacha mma iji nweta ebe. Ọzọkwa, ihe ndị na -esi nri ga -eme ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị mara na gị na ha nọ.
Ahịhịa ndị China, pasta ihendori, na ọbụna pasta bụ ihe ncheta dị ebube iji si na njem gaa China, ma ọ bụ Italy, ọmụmaatụ. Ya mere, cheta kwakọta akpa ọzọ maka ndị nri, ebe ọ ka mma ịkwakọba ihe ncheta ndị a na -atọ ụtọ iche iche. Ị gaghị achọ imepe akpa akwa iji chọpụta na uwe gị dị na ndo paprika na -acha ọbara ọbara.
Ịkwado omenala obodo na ndị na -ese ihe na -egosi na ị bụ onye njem na -eche echiche ma mara ihe. Ọkwá ihendori ejiri aka mee, uwe a kpara akpa, ma ọ bụ akwa lace a kpara akpa bụ ihe ncheta dị egwu ndị enyi gị ga -eji kpọrọ ihe, were, na ụzọ dị mma iji gosipụta ekele gị nye obodo nke nabatara gị.
Nkà mpaghara bụ ihe ncheta mara mma ị ga -alọta na njem ọ bụla na Europe na China. Na China, ị nwere ike nweta oriọna na -acha ọbara ọbara maka chi ọma, si Russia a ejiri aka mee Domovichok nke ahụ ga-echebe ụlọ gị ma ọ bụ iko biya dị jụụ sitere na Prague maka nwanne nna ma ọ bụ nwanne hụrụ biya n'anya. Kedu nnukwu okirikiri eco-enyi na enyi njem, na -anata, na ịgbasa omenala dị ebube n'ofe ụwa.
Ihe ncheta ụlọ
Mee ka njem gị bụrụ akụkụ nke ụlọ gị, ya na okooko osisi Delft mara mma ma ọ bụ tulip osisi si Netherlands. Ihe ncheta ihe ndozi ụlọ nwere ike iji aka mee, na ọtụtụ mgbe ọ ga -akọ akụkọ ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke mmalite ha.
Efere seramiiki n'elu mgbidi, kristal bohemian sitere na Czech Republic, ma ọ bụ elekere cuckoo site na Black Forest bụ nnukwu ihe ncheta ị ga -ewebata site na njem gị na Europe.
Ihe ncheta Iji Weta Site na Njem: Mmanya Obodo
Ịkekọrịta akụkọ site na njem ahụ n'elu iko mmanya dị mma na -enyere aka icheta nkọwa niile dị ụtọ, na oge ọchị. Ịweta mmanya n'ime obodo bụ ihe ncheta a ma ama nke a ga -esi na Europe bute, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ nri ihe ọ drinkụholicụ na -egbu egbu mmadụ niile kwesịrị ịnwale n'ụwa niile.
Ya mere, Limoncello si Italy, ma ọ bụ Riesling mmanya si na ndagwurugwu Rhein na Germany, nke ọ bụla, ọ ga -atọ ndị nabatara ya ụtọ ịnata ụdị onyinye a. Ọ bụrụ na ị maghị ihe bụ ihe ọ drinkụ theụ mpaghara, attentionaa ntị na iko dị na tebụl ndị obodo n'oge nri abalị ma ọ bụ jụọ n'ụlọ mmanya mpaghara.
Ọla bụ ụzọ dị egwu iji mee njem gị nso n'obi. Ihe olu na -agbawa obi, ọla ntị amber si Poland, ma ọ bụ ọla aka na -adọrọ adọrọ mara mma, bụ iberibe na -anaghị apụ apụ, Ọzọkwa, ha enweghị oge.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na -achọ iwebata ihe ncheta pụrụ iche, mgbe ahụ ịchọ mma zuru oke. Itinye amara na mgbaaka gị site na obodo ọ bụla bụ nleta bụ ihe ịtụnanya. Otú ọ dị, mgbe ịzụrụ ọla na mba ọzọ, kpachara anya maka ijikwa ego ma ghara ịdaba na nke ọ bụla wayo njem ndị ewu ewu n'ụwa niile.
Otu Ihe Ha Na -anakọta
Echefu keychains na postkaadị, ọ bụrụ na ndị enyi gị bụ ndị nchịkọta, ọ nweghị ihe na -ekwu na m na -elekọta karịa mpempe pụrụ iche ha nwere ike itinye na nchịkọta ha. Onye ọ bụla na -anakọta ihe: iko mmanya biya mara mma sitere na Prague, Ihe osise iko Murano, Russian Babushka na ihe onyonyo nwa bebi, na ndị a bụ naanị ihe atụ ole na ole.
Ọzọkwa, iko gbara, okpu, na atụdo bụ ihe ncheta ọzọ dị egwu anakọtara iji si na njem gaa Europe. Kpọgide na mgbidi, eji eme oriri, ma ọ bụ echekwa na ọba, Ndị enyi gị ga -eji oge ị nọrọ na -achọ ihe ahụ pụrụ iche na akụkọ dị n'azụ ya kpọrọ ihe.
Nri ụtọ na ihe na -atọ ụtọ ga -amụmụ ọnụ ọchị ma dọta uche onye na -ege ntị. Nri bụ ụzọ kacha mma iji nweta ebe, site na ụtọ niile mmadụ na -eme na omenala na akụkọ. Ọmụmaatụ, Onye Paris Macarons abụghị naanị ihe ncheta dị ụtọ. Ha ka na -ejidekwa isi na mmụọ nke French Renaissance na izu oke ha, ụdị na -enwu enwu.
Ya mere, mgbe ọtịta ole na ole na -eme ka ihe ncheta a kwụsị, ụtọ na mmetụta dị ịtụnanya na -anọnyere anyị ruo mgbe ebighi ebi. Uche anyị ga na -echeta oge mbụ anyị nwara chọkọletị Switzerland, na ndị natara ihe ncheta gị dị ụtọ ga -echetakwa. Na mkpokọta, ihe ncheta dị ụtọ bụ ihe ncheta dị egwu iji si na njem gaa Europe.
Ihe ncheta ị ga -eweta site na njem: Clothing
Ịzụ ahịa bụ otu n'ime ihe kacha mma ịme na mba ofesi. Ị nwere ike ịgbanwe ụdị gị, tinye ihe pụrụ iche na akwa uwe gị dị ka ịchafụ ọdịnala mara mma sitere na Russia, jaket akpụkpọ anụ si Italy, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ iweta ndị enyi gị uwe mwụda, mgbe ahụ ị kwesịrị ịma ụdị na nha ha n'ezie.
Otú ọ dị, enwere ọtụtụ ihe ncheta uwe ịhọrọ na Europe, nke ahụ anaghị agụnye nhọrọ nha. Berlin zuru oke maka ịzụ ahịa vinteji, T-shirts sitere na ahịa okporo ụzọ London, eriri dị mma sitere na Paris ma ọ bụ Italy, bụ naanị echiche ncheta ole na ole iji weta gburugburu ụwa.
Ihe ncheta Cliche ga -esi na njem gaa Europe
Ọ dịghị mgbe ị ga -emejọ ihe ncheta ochie. Ọmụmaatụ, nye ndị enyi na ezinụlọ onyinye igodo Eiffel Tower, Russian Matryoshka osisi, ma ọ bụ mkpọchi osisi si Amsterdam, ndị a ga -abụ ihe ncheta mara mma ma na -eche echiche. Ọzọkwa, ị nwere ike zụta ihe ncheta Europe ndị a mara mma n'ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè, na nkeji ikpeazụ. Otú ọ dị, buru n'uche na ihe ncheta’ ọnụ ahịa ga -adị elu nke ukwuu na ụlọ ahịa ọdụ ụgbọ oloko, karịa n'obodo.
ebe a na Save A Train, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem agaghị echefu echefu na Europe. Ị nwere ike mfe ụgbọ okporo ígwè na -aga ebe ọ bụla na Europe, zụọ ahịa ma nwee ọ enjoyụ njem dị mfe ga -ebu igbe jupụtara akụ na ihe ncheta.
Ịchọrọ itinye akwụkwọ akụkọ blọọgụ anyị "Ihe ncheta ga -eweta site na njem?”N'elu saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Train Travel Austria, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe